महसुल घटाउने कि ?
जलविद्युत् उत्पादनको अपार सम्भावना भए पनि त्यसको दोहानका लागि भने नेपाल चुकेको छ । अहिले लोडशेडिङ नभएकाले धेरैले बिजुलीको समस्या बिर्सिसकेको पाइन्छ । तर, अहिलेको आपूर्ति भारतबाट आयात गरिएका कारण सहज भएको हो । किन नेपालको जलविद्युत् प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेन त ?
नेपालको जलविद्युत् विभिन्न स्वार्थसमूहको रणनीतिको शिकार भएको साँचो हो । अरुण ३ को अवसान नै यसको प्रमाण हो । अहिले पनि बूढीगण्डकी वा अन्य आयोजनामा भइरहेको विवादहरू यस्तै रणनीतिको शिकार हो भन्ने देखिन्छ । अझ पछिल्लो समयमा त आर्थिक स्वार्थहरू बाझेर सरकारी ठूला आयोजना निर्माणमा समस्या देखिएका हुन् ।
अहिले नेपालको निजीक्षेत्रले सानासाना आयोजनाबाट नै भए पनि जलविद्युत्को आपूर्ति बढाएका छन् । केही वर्षको अन्तरालमा यो योगदान अभैm बढ्नेछ । सरकारी आयोजना भने समयमा सम्पन्न नभएर लगानी दोब्बर भइसकेको अवस्था छ ।
जलविद्युत्का विकासका लागि तत्काल देखिएको समस्या भनेको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण एवम् वनक्षेत्रको प्रयोग नै हो । जलविद्युत् आयोजना बन्ने भयो भने पछि जग्गाको भाउ जथाभावी बढाउने गरिएको छ । यस्तो मुआब्जा तिर्न नै अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । त्यसमाथि जग्गा अधिग्रहण नै गर्न नसक्ने अवस्थाले पनि समस्या थपेको छ । त्यसै गरी वनक्षेत्रको रूख कटानमा लामो समय लाग्ने गरेको आयोजना प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ ।
अहिले सरकार विद्युत् उपभोग कसरी बढाउने भनेर लागिपरेको समाचार आएको छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरू समयमा नै सपन्न भए पनि पक्कै पनि बिजुली बढी हुन सक्छ । यस्तोमा बिजुलीको शुल्क घटाउनुपर्छ । शुल्क केही घट्यो भने यसको खपत स्वतः बढी हाल्छ । तर, प्राधिकरण भने शुल्क बढाउने तयारीमा लागेको छ । एकातिर विद्युत् खपत बढाउने उपाय खोज्ने अर्कातिर शुल्क बढाउने नीति उपयुक्त देखिँदैन ।
खाना पकाउन आयातित ग्यासको उपयोग भइरहेको छ । यसले नेपालको व्यापारघाटा बढाइरहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि असर पारेको छ । त्यसैले बिजुलीको भाउ घटाएर यसको उपभोग बढाउने नीति तय गरिनुपर्छ । भारतीय नाकाबन्दीका बेला धेरै मानिसले इन्डक्शन चूल्हो किनेका थिए । कतिपयले त्यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, ग्यासको सहज उपलब्धतासँगै धेरैले यसलाई थन्क्याएका छन् । भाउ घट्ने हो र ग्यासभन्दा सस्तो बनाउन सक्ने हो भने ग्यासभन्दा सुरक्षित र सस्तो बिजुली उपभोग गर्न मानिसहरू लागिहाल्नेछन् । हुन त ग्यासभन्दा बिजुलीमा खाना पकाउँदा सस्तो पर्छ भन्ने गरिएको छ । तर, विद्युत् शुल्कसँगै थप सेवाशुल्क पनि तिर्न परिरहेकाले बिजुलीमा खाना पकाउँदा सस्तो पर्छ भनेर धेरैले पत्याएका छैनन् । खाना पकाउन बिजुलीको उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।